Iyo online yekubhadhara mhinduro Paysafecard inowedzera yayo yekuparadzira chiteshi | ECommerce nhau
Eva maria Rodriguez | | eCommerce, Nzira dzokubhadhara
paysafecard, iyo prepaid mhinduro yekugadzira online payments Mutungamiri muEurope, achangobva kuzivisa kuti iri kuwedzera chiteshi chayo chekuparadzira nemapoinzi matsva ekutengesa uye ekushandisa kwesekinoroji. Paysafecard yakaiswa seyakakwana mhinduro kune avo vanokoshesa kuchengetedzeka kwedata ravo, vanoda kudzikisira mari yavo kana kungova vasina kiredhiti kadhi, nekuti inobvumidza vatengi kubhadhara nekukurumidza, zvakapusa uye zvakachengeteka, sekunge vari kubhadhara mari .
La prepaid mhinduro yepamhepo kubhadhara Paysafecard yatosvika zvinopfuura makumi matanhatu neshanu mapoinzi ekutengesa kuSpain uye mazana mashanu ezviuru pasirese. Vainyanya kugovera vanosanganisira zvivakwa, tobacconists uye post office, pamwe nenzvimbo dzinozivikanwa dzakadai seEl Corte Inglés, Repsol, Día, Opencor, Media Markt, Game uye Fnac. Uyezve, neapp yayo yave kuwanikwa yeApple Watch, Paysafecard inorerutsa ruzivo rwevatengi rwekuita nekuita kuti zvive nyore kwavari kuti vawane zvitoro.
Paysafecard iri mukuwedzera zvizere. Muchokwadi, yatove kupfuura hafu yemiriyoni mapoinzi ekutengesa kutenderera pasirese, uko makuponi anogona kutengwa zviri nyore, nekukurumidza uye mahara. Kune izvi, isu tinofanirwa kuwedzera kutengesa kuburikidza nemachina, SMS uye iyo paysafecard online chitoro. Mamirioni epa paysafecard PINs anotengeswa zuva nezuva kubva kuNew Zealand kuenda kuPortugal, uye kubva kuLatvia kuenda kuPeru.
Kudyidzana kwenyika dzepasi rose chinhu chakakosha pakubudirira kwe digital kubhadhara. Nechikonzero ichi, Paysafecard inoita nhamburiko dzese dzekuenderera nekuwedzera yayo yekuparadzira network ichifunga mabhenefiti uye zvinodiwa nevatengi nevatengesi. Zvinoenderana ne paysafecard, haugone kupinda mumisika nyowani pasina hushoma vimbiso kubva pakutanga, uye ndosaka ichi kusvika iyi nhamba yemapoinzi matsva ekutengesa kunoonekwa sekubudirira kukuru.
Iyo itsva app yeApple Watch kubva kuPaysafecard
La kushandiswa Paysafecard ikozvino yawanikwa Apple Watch, inova nhanho kumberi maererano neyakareruka mukutenga pamhepo uye varaidzo. Iyo intuitive app inobvumidza vashandisi kuwana yavo yepedyo paysafecard poindi yekutengesa vachishandisa foni yekufambisa ficha uye tarisa yavo iripo muyero mumasekondi mashoma. Uye zvakare, zvigadziriso zvenguva dzose zvinopihwa pamakwikwi uye kukwidziridzwa.
Ichi chishandiso chitsva chinoenderanawo ne tekinoroji inopfeka yeApple Wear, inokutendera iwe kuti uwane nzvimbo dzekutengesa dzemaponi ako nyore kuburikidza nekubatana neiyo SmartWatch, kuburikidza neiyo Android Wear inoshanda sisitimu uye iyo yave kuwanikwa zvakare kune Apple Watch. Iyo inozivikanwa yekushanduka-ne-kutendeuka kufamba kunoiswa kuburikidza neGoogle Mepu nzira uye inoratidzwawo pachiratidziro chewatch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Nzira dzokubhadhara » Iyo online yekubhadhara mhinduro Paysafecard inowedzera yayo yekuparadzira chiteshi